एमालेले संसद बैठक अबरुद्ध गरिरहँदा किन चिच्याए माओवादी सांसद ?
ARCHIVE, POLITICS » एमालेले संसद बैठक अबरुद्ध गरिरहँदा किन चिच्याए माओवादी सांसद ?
काठमाडौं - व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगन भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहँदा मतपत्र च्यातिएको घटनाको विरोध गर्दै आएको एमालेले विहीबार दोस्रो दिन सदन अवरोध गरेको हो । तर बिहिबारको संसद वैठकको माहौल भन केही भिन्न बन्यो ।
बैठक आरम्भ हुनासाथ एमालेका सांसदहरु आफ्नो स्थानबाट उठेर अवरोध गरे । त्यति नै बेला जुरुक्क उठे माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारी । उनले नियमापत्ति भनेर एकोहोरो कराएपछि बैठक हाँसोले गुञ्ययमान भएको थियो । सभामुख घर्तीले एमाले सांसदले अवरोध जनाइरहेका बेला नियमापत्तिका लागि बोल्न दिन नसक्ने बताएकी थिइन् । तर उनि भने केहिछिन बोलिरहे । संसद बैठक जेठ २१ गते बिहान ११ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।